:: My Little World ::: December 2013
The last lunch of 2013
ထုံးစံအတိုင်း ဒီနေ့နေ့ တစ်ဝက် အလုပ်လုပ်ရတယ်။ အလုပ်က အပြန်မှာ အထက်လူကြီးဟောင်းက နေ့ လည်စာ လိုက် ကျွေးမယ်ဆိုခေါ်တယ်။ တကယ်ဆို မသွားချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လူမှု့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ဆိုတာကြီးက ရှိသေးတော့လည်း သွားချင်တာ မသွားချင်တာ အသားထား လိုက်သွားစားရတော့တာပေါ့။ အသက်ကြီးလာလေလေ လုပ်ချင်တာ မလုပ်ရ၊ လုပ်သင့်တာ လုပ်နေရတာများလာ လေလေ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
စားသောက်ဆိုင်ကို နေ့ လည် ၁၂း၃၀ လောက် ရောက်သွားတာ ပြောရင်းစား၊ စားရင်းပြော လုပ်ရတာ ဆိုင်ကထွက်လာတော့ ၃ နာရီ ရှိပြီ။ စားဖို့ ထက်စာရင် စကားပြောဖို့ က အဓိကလို့ ပြောရင် ရမယ် ထင်တယ်။
အများကြီး မစားနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပုဇွန်ကြိုက်လို့ပြန်ခါနီးမှာ နောက်တစ်ခေါက်သွားယူစားရင်း လှတပတလေး ဖြစ်အောင် ထည့်လာတယ်။ ဒီလိုပဲ စိတ်ကူးတည့်ရာလုပ်ပြီး စိတ်ချမ်းသာအောင်နေရတယ်။ ပုဇွန် နှစ်ကောင်ဆို အသည်းပုံ တစ်ခုရတယ်။လေးကောင်ဆိုတော့ အသည်းနှစ်ခု။
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင် အသီးအနှံလေး စားလိုက်အုံးဆို တိုက်တွန်းတာကြောင့် ဒီလောက်သွား ယူစားလိုက်ရတယ်။ ဗိုက်ပြည့်နေပြီ။ လူကြီးတွေနဲ့ထမင်းစားရတာ မလွယ်ဘူး။
ဒီညနေ အသိတစ်ယောက် အိမ်မှာ ညစာ သွားစားရအုံးမယ် ဆိုတော့ ဗိုက်ထဲ နေရာ ချန်ထားရသေးတယ်။ ညစာကလည်း ကောင်းမယ် ထင်တယ်။ Spaghetti ကို လက်စွမ်းပြပြီး special ချက်ကျွေးမှာတဲ့။
နှစ်ဟောင်းကို နှုတ်ဆက်ပြီး နှစ်သစ်ကြိုတဲ့ အနေနဲ့ဒီနေ့တစ်နေကုန် အစားများများပြီး စိတ်ချမ်းသာ လူကျန်းမာအောင်နေရမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 12/31/2013 06:16:00 PM0comments
The fruit called Star Apple
သစ်သီး တစ်မျိုး။ အရင်က တစ်ခါမှ မသိ၊ မစားခဲ့ဖူးဘူး။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ယူလာပေးလို့ မြင်ဖူး စားဖူးသွားကြတယ်။ အားလုံး စားရအောင်ဆို အများကြီး ယူလာပေးတယ်။
တကယ်ဆို စားနေတုန်း မျက်နှာအမူအယာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ် သိအောင် လေးရိုက်ထားလိုက်ရမှာ။ ခုတော့ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အသီးဓာတ်ပုံတွေပဲ မှတ်ထားလိုက်တယ်။
အသီးက အနီနဲ့အစိမ်းမျိုးဆိုပြီး အရောင်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပြောတယ်။ ခုစားကြည့်တာကတော့ အစိမ်းရောင် အသီးမျိုး။
ပုံကြည့်ပြီးတော့ အခွံမာ အသီးလို ထင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုင်ကြည့်တော့ အခွံက ခပ်ပျော့ပျော့ပဲ။ အထဲက အသားကလည်း ခပ်ပျော့ပျော့ဆိုတော့ အသီးကို သရက်သီးစတဲ့တခြားအသီးတွေစားသလို အခွံနွာပြီး စားလေ့မရှိဘူး ပြောတယ်။ ဘယ်လိုစားလေ့ရှိကြလည်းဆို အသီးကို နှစ်ခြမ်းခွဲပြီး ဇွန်းနဲ့ ခြစ်စားတယ်။ ဒါမှမဟုတ် လေးစိတ်စိတ်ပြီး အထဲက အစားကို ကိုက်စားတယ်။ ရှောက်ချိုသီး စားသလိုမျိုး။ အခွံ မစားရဘူး။
နှစ်မျိုးလုံး စားကြည့်ဖြစ်တယ်။ နှစ်ခြမ်းခြမ်းပြီး ဇွန်းနဲ့ခပ်စားရတာကို ပိုကြိုက်တယ်။ စားလည်းပြီးတော့ အခွံက ခွက်လေးပုံစံ ကျန်ခဲ့တယ်။
အရသာက ချိုတယ်။ ကျွန်မ အတွက်တော့ အဲ့ဒီအသီးအရသာက သြဇာသီး အရသာနဲ့ဆင်တယ် ခံစား ရတယ်။ အဖြူရောင် အစေးနေရာစားမိရင် နည်းနည်း ဖန်တယ်။ တခြား သူတွေ ကတော့ ကြိုက်ကြတယ်။ စားကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။
အစေ့ယူပြီး အပင်စိုက်ကြည့်ရင်ကောင်းမလား စိတ်ကူးမိကြတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ အဲဒီစိတ်ကူး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ အစေ့ကို ပျိုးထားဖြစ်မှာ သေချာတယ်။
Google ကနေ လိုက်ရှာဖတ်ကြည့်တော့ ဒီအသီးက Central America ကလို့ သိရတယ်။ ဖတ်မိသလောက် အာရှမှာ ဗီယက်နမ် (Vietnam) နဲ့ဖိလစ်ပိုင် (Philippines) ထင်ရှားတယ်လို့စားလေ့ရှိတယ် သိရတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေမှ ရှိမရှိ မသိဘူး။
YouTube မှာတွေ့ တဲ့ Star Apple ဘယ်လို စားရလဲဆိုတာ How to Eat A Star Apple by Big Island Farm Fresh Foods
ဗီယက်နမ်တွေ ပြောလေ့ရှိတဲ့ Vú Sữa အကြောင်း Vú Sữa-Milky fruit-a thoughtful story
Wiki: မှာတွေ့ ရတဲ့ အချက်အလက်တွေ Chrysophyllum cainito
Scientific Name:Chrysophyllum cainito
Common Names: Star Apple, Vú Sữa (Vietnam), Swarnapathry(Malayalam), Golden-leaf tree (English), Caimito, Estrella, Caimo morado, Caimito maduraverde, (Spanish), Cainito, Ajara (Portuguese), Caimite, Caimitier (French)
Distribution: Caimito is found throughout the Caribbean Region, Central America, northern South America, Australia, and some countries of Southeast Asia and Africa. History: Caimito was observed growing by Spanish explorers in Peru during the 1500s. Seeds were introduced into Hawaii in 1901 and into Florida around 1887. During the 20th century it was distributed to parts of Asia and Africa.
Posted by Nay Nay Naing at 12/30/2013 03:40:00 PM0comments
Myanmar - 2nd most generous country in the world
ဒီမနက် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ အလကားဝေပေးတဲ့ သတင်းစာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ MyPaper သတင်းစာ မှာ ပါတဲ့ Lim Yi Han ရေးသားတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေအကြောင်း "Sorry, stranger, can't help you" ဖတ်ရင်းကနေ ဘေးမှာဖော်ပြထားတဲ့ ကို သတိထားမိလိုက်တယ်။ ဘေးမှာ ကိုယ့်လိုပဲ သတင်းစာဖတ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းကလည်း မြန်မာ ကို သတိထားမိပြီး ကိုယ့်ကို "Congratulations" လို့ဝမ်းသာအားရ ပြောတယ်။ မြန်မာတွေ ကူညီတတ်တယ်၊ စိတ်သဘောထားကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ ကောင်းသတင်းတွေကို အမြဲတမ်း ထိမ်းသိမ်းနိုင်ပါစေလို့ လည်း ဆက်ပြောသေးတယ်။
ကောင်းသတင်းမို့ဒီနေရာမှာ အားလုံးသိအောင် ရှယ်ယာလုပ်ရင်း မှတ်ထားလိုက်တယ်။
The World Giving Index 2013 has ranked Myanmar as the most generous country in Aisa and second most generous country in the world.
Myanmar - WGI Ranking 2
World Giving Index score - 58%
1) Helpingastranger - 46%
2) Donating money -68% 3)
Volunteering time - 43 %
The World Giving Index score is based on an average of three measures of giving behaviour - the percentage of people who, inatypical month, donate money to charity, volunteer their time, and helpastranger.
From World Giving Index 2013
Posted by Nay Nay Naing at 12/04/2013 03:01:00 PM 1 comments